(လေ့လာနေဆဲ လူငယ်တစ်ယောက် မှ နည်းပညာ မျှဝေခြင်း)
Posted by AungKyaw KyawWin at 10:23 AM No comments:
စိတ်​ကူးယဉ်​ ဆန်​ဆန်​ Live Wallpaper
Posted by AungKyaw KyawWin at 8:46 AM No comments:
That's for my best friend.
Posted by AungKyaw KyawWin at 3:27 PM No comments:
Beautiful wallpaper For Valentine's Day
ချစ်သူများနေ့အတွက် wallpaper လှလှလေးတွေပါ။လိုချင် ရင်အောက်က Download လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်က zip file နဲ့တင် ထားတာပါ Androud မှာဖတ်ဖို့ ZIP Apk မရှိရင် ဒီမှာဒေါင်းပါ. DownloadZIP.APK
။နောက်ထပ်ပုံ လေးများကို ထပ်တင်ပေးသွားမှာ နော် . . . . . . .။
Posted by AungKyaw KyawWin at 11:51 PM No comments:
SayHi- Find People Nearby! v1.96 for Android
Chatting ပြောရတာဝါသနာပါတဲ့ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် SayHi လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးထဲကနေ chat မယ်ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုပြီး chatting ပြောနေသူအချင်းချင်း ဘယ်နေရာကနေပြောနေတယ်ဆိုတာကို နေရာအတိအကျ ဆော့ဝဲရဲ့မြေပုံကနေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က မန္တလေးကနေ သုံးနေတာဆိုတော့ ဒီဆော့ဝဲထဲကိုဝင်လိုက်ရင် မန္တလေး location ထဲကလူတော်တော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်။ SayHi app လေးကို ဖုန်းထဲမှာသွင်း ၊ ပြီးရင် SayHi app ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနာမည်နဲ့ register လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် SayHi Chatting ကိုစသုံးနိုင်ပါပြီ။ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသုံးဖို့အတွက် ဖုန်းမှာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တော့ရှိရပါမယ်။လိုချင်ရင်တော့အောက်မှာပါ။
Posted by AungKyaw KyawWin at 8:52 PM No comments:
All-In-One Toolbox(17 Tools)
နာမ်မည်ကတော့ all-in-one toolbox တဲ့။ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ battery booster,memory booster and kill manager
အစရှိသဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်း 17ခု ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ဒါလေးတခု ထဲ ကို အသုံးပြု ခြင်း အားဖြင့် အခြား application ၁၆ခုကိုပါ အသုံးပြုသလိုပါပဲ ။သုံးကြည့်လိုက်ကြပါအုန်း။မိုက်မှမိုက်။အောက်မှာ ScreenShot လေးတွေပါ။
Posted by AungKyaw KyawWin at 8:48 PM No comments:
Kaspersky 2012 Update
Myanmar Blog Collection
Great BTC ease Click
Get Free BTC , Click
Files တွေ Download လုပ်ရင် password-aungkyawkyawwin ပါ။
ကျွန်တော့ ဘလော့ကို Android Phone မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
လာရောက်လာတဲ့ အတွက်(aungkyawkyawwin.blogspot.com)မှ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။. Awesome Inc. theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.